लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओक्पे ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली डच डाँग्मे डेनिश ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बासा (क्यामरून) बिकोल बुल्गेरियन बोउलो भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन मराठी मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिङ्रेलियन म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
पोल्याण्डकी किशोरीको सही निर्णय
“बप्तिस्मा गर्दा म १५ वर्षकी थिएँ। छ महिनापछि मैले सहायक अग्रगामी सेवा सुरु गरें। त्यसको एक वर्षपछि नियमित अग्रगामी सेवा गर्न फारम भरें। उच्च माध्यामिक स्कुलको पढाइ सिद्धिएपछि राज्य प्रचारकहरूको आवश्यकता धेरै भएको ठाउँमा गएर सेवा गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले सोधें। म मामाघरको हजुरआमासित बसथें, जो यहोवाको साक्षी हुनुहुन्नथ्यो। त्यसैले म उहाँसित नबसी अनि आफ्नो गाउँ छोडेर अर्कै ठाउँमा सेवा गर्न चाहन्थें। तर क्षेत्रीय निरीक्षकले मलाई आफू जन्मेहुर्केकै ठाउँमा बसेर सेवा गर्न भन्नुभयो। यो सुनेर साह्रै नमीठो लाग्यो। तर आफूलाई खल्लो लागेको कुरा म उहाँलाई थाह दिन चाहन्नथें। आफूलाई खुसी नलागे पनि मैले उहाँको कुरालाई राम्ररी सोच्ने विचार गरें। मसँगै अग्रगामी सेवा गरिरहेकी साथीलाई यसो भनें: ‘सायद म योनाजस्तै भइरहेछु। तर जे भए पनि पछि योना निनवे गयो नि! त्यसैले म पनि आफूलाई खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नेछु।’”
“अहिले मैले आफ्नै गाउँमा अग्रगामी सेवा गरिरहेको चार वर्ष भइसक्यो। सल्लाह पालन गर्नु कत्ति बुद्धिमानी हो भनेर अहिले बुझ्दै छु। नकारात्मक मनोवृत्ति राख्नु मेरो सबैभन्दा ठूलो भूल थियो। तर अहिले मैले अपार आनन्द अनुभव गरिरहेकी छु। एक महिनामै २४ वटा बाइबल अध्ययन गर्न सकें। खुसीको कुरा, पहिला विरोध गर्ने हजुरआमासित पनि मैले बाइबल अध्ययन थाल्न सकें। यसको लागि यहोवालाई मुरी-मुरी धन्यवाद!”
फिजीमा असल परिणाम प्राप्त भयो
फिजीमा बाइबल अध्ययन गरिरहेकी एउटी साक्षी बहिनीले अधिवेशन जाने कि श्रीमान्‌सँगै नातेदारको जन्मदिनको पार्टीमा जाने भनेर छनौट गर्नुपरेको थियो। श्रीमान्‌ले पनि तिनलाई अधिवेशन जान दिए। तिनले श्रीमान्‌लाई अधिवेशन सकाएर पार्टीमा भेटौंला भनेकी थिइन्‌। तर अधिवेशनबाट फर्केपछि भने तिनले आफ्नो आध्यात्मिकतालाई खतरामा पार्न सक्ने अवस्थाबाट टाढै बस्नुपर्छ जस्तो महसुस गरिन्‌। त्यसैले तिनी पार्टीमा गइनन्‌।
पार्टीमा श्रीमान्‌ले आफ्ना नातेदारहरूलाई आफ्नी पत्नी ‘साक्षीहरूको मिटिङ’ सकाएर आउँछिन्‌ भनेर बताउँदा तिनीहरूले यसो भने: “अहँ, उनी आउँदिनन्‌, किनभने यहोवाका साक्षीहरू जन्मदिन मनाउँदैनन्‌।” *
श्रीमतीले आफ्नो विश्वास र अन्तस्करणअनुसार काम गरेकीमा श्रीमान्‌ निकै खुसी भए। यहोवाप्रति वफादार रहेकी हुँदा ती बहिनीले आफ्नो श्रीमान्‌लाई अनि अरूलाई साक्षी दिने मौका पाइन्‌। नतिजा के भयो? श्रीमान्‌ बाइबल अध्ययन गर्न राजी भए र आफ्नी श्रीमतीसित सभामा जान थाले।
^ अनु.7प्रहरीधरहरा, डिसेम्बर १५, २००१ मा भएको “पाठकहरूका प्रश्नहरू” हेर्नुहोस्।